China Photochromic pigment uv pigment color color change powder by sunlight Ukwakha kanye nefektri | Ngaphezulu
i-UV fluorescent pigment ye ...
Umbala we-Thermochromic we-t ...
Photochromic sombala UV ingulube ...
I-Photochromic pigment UV pigment color change powder ngokukhanya kwelanga
Umbala wesithombe uhlobo lwama-microcapsule. Ngophawuda wangempela ogoqwe kuma-microcapsule.Izinto zomgubo zingashintsha umbala elangeni. Lolu hlobo lwezinto ezibonakalayo lunezimpawu zombala obucayi nekhono lesimo sezulu eside. Ingangezwa ngqo ngokulingana nomkhiqizo ofanele.
I-pigment ye-Photochromic uhlobo lwama-microcapsule. Ngophawuda wangempela ogoqwe kuma-microcapsule.Izinto zomgubo zingashintsha umbala elangeni. Lolu hlobo lwezinto ezibonakalayo lunezimpawu zombala obucayi nekhono lesimo sezulu eside. Ingangezwa ngqo ngokulingana nomkhiqizo ofanele. Sikhiqiza usayizi wezinhlayiyana we-powder ungaba ngu-3-5 um, ukugxila kwengxenye esebenzayo kuphakeme kuneminye imikhiqizo efanayo emakethe. Ukushisa kokumelana nokushisa kuze kufike kuma-degree angama-230.
♥ Umbala ogqamile, umbala ozwelayo
♥ Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana ne-solvent
♥ Ukumelana nesimo sezulu okude kakhulu
♥ ukuzivumelanisa nezimo okuqinile, kulula ukusabalalisa ngokulinganayo
♥ Thobela ukuhlolwa komkhiqizo we-GB18408
1. Uyinki. Ifanele zonke izinhlobo zezinto zokuphrinta, kufaka phakathi izindwangu, iphepha, ifilimu yokwenziwa, ingilazi ...
2. Ukumboza. Kufanele zonke izinhlobo zemikhiqizo yokumboza ebusweni
3. Ukujova. Kusebenza kuzo zonke izinhlobo zepulasitiki, i-PVC, i-ABS, iraba le-silicone, enjalo
njengoba umjovo izinto, extrusion udini
Umbala wesithombe ingasetshenziswa kupende, uyinki, umkhakha wepulasitiki. Iningi lomklamo womkhiqizo ungaphakathi endlini (ayikho imvelo yokukhanya kwelanga) umbala ongenambala noma okhanyayo futhi ongaphandle (imvelo yelanga) inemibala egqamile.
Imibala yePhotochromic zizwela kakhulu emathonyeni ama-solvents, i-PH, kanye ne-shear kunezinye izinhlobo eziningi zombala. Kumele kuqashelwe ukuthi kukhona umehluko ekusebenzeni kwemibala ehlukahlukene ukuze ngamunye ahlolwe kahle ngaphambi kokufaka isicelo sezohwebo.
Izingulube ze-Photochromic unokuqina okuhle lapho kugcinwa kude nokushisa nokukhanya. Gcina ngezansi kwama-25 Deg.C. Ungayivumeli iqhwa, ngoba lokhu kuzolimaza amaphilisi we-photochromic. Ukuvezwa isikhathi eside ekukhanyeni kwe-UV kuzolulaza ikhono lamaphilisi we-photochromic wokushintsha umbala. Impilo yeshalofu yezinyanga eziyi-12 iqinisekisiwe inqobo nje uma impahla igcinwa endaweni epholile futhi emnyama. Ukugcina isikhathi eside kunezinyanga eziyi-12 akunconyiwe.
Olandelayo: I-pigment ye-Thermochromic ye-Thermochromic Paint Indwangu ye-Thermochromic Ink Indwangu ye-Thermochromic